०६० को दशकअघि नेपाली लेखकहरू आफ्ना किताब हात–हातमा बाँड्दै हिँड्थे । तर, ०६० को दशकको मध्यतिरबाट साहित्यको बजार फस्टायो । नारायण वाग्ले, राजन मुकारुङ, बुद्धिसागर, अमर न्यौपाने, सुविन भट्टराईका किताब भटाभट बिक्री हुन थाले । किताब बिक्री हुन थालेपछि लेखकहरू ‘फुल टाइटमर’मा दरिन थाले । प्रकाशक पनि च्याउसरी उम्रिए । नयाँ लेखक पनि उस्तै मात्रामा जन्मिए । प्रकाशक–लेखक सबैको ध्येय एउटै
सुरुमै भनौँ, नेपाली गीत–संगीतमा हजारौँ सिर्जना भएका छन् । सबै सर्जक, कलाकारले अमूल्य साधना गर्नुभएको छ, आफ्नो जीवन नै समर्पण गर्नुभएको छ । उहाँहरूप्रति सदा सम्मान छ । यो आलेख ‘नेपाली’ भनिएको गीत–संगीतमा ‘के गरियो’ भन्ने जिज्ञासा मात्रै हो । अहं पटक्कै होइन । बहस र विमर्शका लागि त सबैले खुला छाती बनाउनैपर्छ । संयोगले यतिवेला नेपाली संगीतकर्मीहरू ‘रोयल्टी’ वा ‘प्रतिलिपि
तपाईंलाई यात्रा गरिरहन मन लाग्ने देश भारत हो भन्छन्, किन ? हो, मैले घुमेका अनेक देशमध्ये भारतको यात्रा बढी रोमाञ्चक र यादगार छ । म हरेक वर्ष भारत भ्रमणमा निस्कने गर्छु । भारत घुम्न गहिरो आकर्षण हुनुको कारण के होला ? हाम्रो यात्राको प्रसिद्धि भारतसँग जोडिन्छ । हामी भारतसँग नजिक छौँ । युवाकालमा भारत भ्रमण नै ठूलो यात्रा हुन्थ्यो ।
उदयजी, साहित्यको एउटा कर्तव्य भविष्यको जन्मकुण्डली लेख्ने पनि हुन्छ । के हिन्दी साहित्यले वर्तमानको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यको पूर्वानुमान गर्न सक्यो, जहाँ हामी आज उभिएका छौं ? ‘जन्मकुण्डली’ बनाउने विद्या अथवा भविष्यवाणी गर्ने काम समाजको एउटा निर्धारित वर्णको अधीन हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले म बारम्बार भन्ने गर्छु, एउटा हिन्दी छैन, हिन्दी समाजमा निकै धेरै हिन्दी छन् । यस प्रकारका
म कहिलेकाहीँ त्यस्तो भविष्यको कल्पना गर्छु, जहाँ यौन अस्तित्वमै हुँदैन । धेरै मानिसले यसलाई आश्चर्य ठान्न सक्छन्, तर मेरा लागि यो त्यस्तो संसार हो, जसले अद्भूत साथ विगतमा फर्काउँछ । जब म सानो थिएँ र ‘सेक्स’ शब्द याद थिएन, त्यतिवेला हरेक दिन आफ्नै शरीरले मलाई आश्चर्यमा पाथ्र्यो । झन्डै तीन वर्षको छँदा आफैँभित्र घुमिरहेको सम्झना मलाई छ । जब
सन् १९०३ मा फ्रान्समा जन्मेकी सिमोन डी बोउवार प्रेम, यौन र महिला मुक्तिबारे विगुल फुक्ने लेखक हुन्  । महिला उत्पीडनको चिरफार गरेकी सिमोनलाई विवाह–संस्थामा विश्वास थिएन  । अविवाहित रहे पनि उनी अस्तित्ववादका प्रवर्तक ज्याँ पाल सार्त्रसँग प्रेम र यौन–सम्बन्धमा रहिन् । सार्त्र र सिमोनको जीवनमा पटक–पटक तेस्रो व्यक्ति आए पनि उनीहरूबीच माया र विश्वास कायम रह्यो । अर्की ऐतिहासिक
२ करोड लागतमा पुष्पलाल प्रतिष्ठानमा पुस्तकालय भवन
कीर्तिपुर चम्पादेवीस्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान परिसरमा पुस्तकालय तथा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । भवनको शिलान्यास पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बिहीबार गरेका छन् । २ करोड ५ लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन कम्युनिस्ट आन्दोलनसहित नेपाली इतिहासको समग्र अध्ययन स्थल बन्ने विश्वास लिइएको प्रतिष्ठानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल कम्युनिस्ट
झमक भेट्नुअघि रोजिता बुद्धाचार्य (२६)लाई एकाबिहानै ‘थिएटर भिलेज’बाट फोन आयो । फोन थियो रंगकर्मी विमल सुवेदीकोे । भर्खर नुहाएकी रोजिताको कपाल पनि सुकेको थिएन । भिजेकै कपालमा उनी थिएटर भिलेज पुगिन् । भन्छिन्, ‘एकदम ‘झोलेपारा’ले पुगेको थिएँ ।’ थिएटर भिलेजमा पुगेपछि विमल सुवेदीले चिनाए ‘जीवन काँडा कि फूल’का निर्माण टिमलाई । तर, रोजिताका लागि सबै नौला थिए । लेखक मुकुन्द बराल र
(‘डिस्क्लेमर’– यो अनुभूतिले द्वन्द्वकालताकाको तिक्तता ओकल्नेछैन । तिक्तता उब्जिएमा त्यो तपाईंको पित्तको दोष हुनेछ । यो अनुभूतिले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य निरूपण ‘यसकारण’ हुनुपर्छ भनेर पनि कोट्याउनेछैन । कोट्टिएको लागेमा त्यो लेखककै चरम भावुकताको दोष हुनेछ । त्यसैले पीडक र पीडितबीच ‘मेलमिलाप’ होस् कि नहोस्, यसले बाल दिँदैन । किनकि यहाँ शान्तिभंग हुन नदिनु भनेकै ‘ऐया’ नभनी चुपचाप बस्नु हो । तसर्थ
अमेरिकी गृहयुद्ध पहिलो वर्षमा हिँडिरहेको छ । दास प्रथाका कट्टर समर्थक रहेका दक्षिणका ११ वटा राज्य छुट्टिएर कन्फेडेरेट राज्य घोषणा भइसकेको छ, यद्यपि त्यसको समर्थन कतैबाट आएको छैन । चार वर्षजति पछि साढे ६ लाखभन्दा बढीको ज्यान जाने त्यो गृहयुद्धको पहिलो वर्ष तीन हजारजतिको मृत्यु भइसकेको छ । राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका ११ वर्षीय साहिँला छोरा ज्वरोले ग्रस्त भएर